ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူလိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူလိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီပုံရိပ်….
September 12, 20190285
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေမှုံရတီကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီကတော့ လတ်တလောမှာလည်း ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Shwe Hmone Yati fb and Haw
ရွှေမှုံရတီကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း မြင်သူတစ်ကာစွဲမက်သွားစေမယ့် အလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေလွန်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ရွှေမှုံရတီကတော့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်သာမက အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Source : Shwe Hmone Yati fb
အသကငြယငြယလြေးနဲ့ အောငမြှငမြှုတှရရှေိနတေဲ့ မှနမြာနိုငငြံရဲ့ ထိပတြနြးမငြးသမီးတစယြောကဖြှစတြဲ့ ရှမှေုံရတီကတော့ ပရိသတတြှရေဲ့ အားပေးခစွခြငမြှုတှကေို ရရှိထားတဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ ရှမှေုံရတီကတော့ လတတြလောမှာလညြး ရုပရြှငကြားကှီးတှကေို ဆကတြိုကရြိုကကြူးနတောဖှစပြှီး ပရိသတတြှအတှေကြ ကှိုးစားနတောဖှစပြါတယြ။
ရှမှေုံရတီကတော့ ဆိုရှယမြီဒီယာပေါမြှာလညြး ပရိသတတြှနေဲ့ အဆကအြသှယမြပှတတြဲ့သူတစယြောကလြညြးဖှစပြါတယြ။ သူမကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညြး မှငသြူတစကြာစှဲမကသြှားစမယြေ့ အလှတရားတှနေဲ့ ပှညြ့စုံနလှနြေးတဲ့ ဓါတပြုံတှကေို မွှဝပေေးလိုကပြှနပြါတယြ။
ရှမှေုံရတီကတော့ သရုပဆြောငအြဖှစသြာမက အဆိုတောတြစယြောကအြဖှစပြါ အောငမြှငမြှုတှကေို ရရှိနတောလညြးဖှစပြါတယြ။ သူမကတော့ သာယာပွောရြှငတြဲ့ အိမထြောငရြေးကို ပိုငဆြိုငထြားတာဖှစလြို့ ပရိသတတြှေ အားကရွတဲ့ အနုပညာရှငတြစယြောကလြညြးဖှစပြါတယြ။
မော်ဒယ်တစ်ဦးပီသစွာ Fashion စတိုင်ကျကျဝတ်ထားတဲ့ မေမြတ်နိုး